Home » Travel Associations News » Ny World Network Network dia namporisika an'i Kuleana ho an'ny 2021
Ny andraikitra dia miteraka vintana
Mandalo zava-misy vaovao sarotra ny fizahantany izay mila valiny vaovao
Ho antsika ato amin'ity sehatra ity dia tsy mila fanamboarana vetivety isika, mbola tsy mila sisin-tany malalaka, ary tsy afaka mampiroborobo ny dia iraisam-pirenena amin'izao fotoana izao, fa mety afaka mifantoka amin'ny fotoana mety fivezivezena isam-paritra na any an-toerana. Ara-politika sy ara-toekarena ity dia pilina sarotra atelina.
100 taona lasa izay, resy ny Flu Espaniola. Androany, ny World Virtual Network Network (WTN's) Taom-baovao virtoaly an'ny Taom-baovao dia nanasongadina mpitari-dalana fizahan-tany avy amin'ny firenena 8 mizara ny fanantenan'izy ireo, ny nofinofiny ary ny fahagagana nataony tamin'ny alàlan'ny fiarahabana amin'ny fanarenana ny indostrian'ny fizahan-tany sy fizahan-tany amin'ny 2021.
Nipetraka tany Hawaii i Juergen Steinmetz nandritra ny 32 taona lasa. Izy no mpanorina ny Tambajotra fizahan-tany manerantany ary nilaza hoe: “Zava-dehibe ho antsika rehetra amin'ity indostrian'ny fizahan-tany sy fizahan-tany ity ny fiaraha-miasa. Midika izany fa mila mampiditra ny sehatra rehetra isika ary manaiky feo vaovao ho re, mba hahafahantsika ho vonona amin'ny andro hanokafana ny fizahantany. "
Any Hawaii dia misy ny teny hoe "kuleana." Raha adika malalaka, midika hoe "andraikitra" izany. Matetika amin'ny vanim-potoana ankehitriny, dia re ho valin'ny olona iray manondro fa, "Hey, tsy adidinao ve izany?" izay notondroin'ilay nanondro azy dia nilaza hoe: "Tsy anjarako izany!" Mitovy amin'ny sangisangy taloha momba ny mpiaro sy mpizara ao amin'ny trano fisakafoanana io. Rehefa mangataka zavatra amin'ny mpizara ny mpanjifa dia matetika ny valin-teny hoe: “Miala tsiny fa tsy ity no tobiko.”
Saingy tsy natao ho valinteny fiarovana mihitsy i kuleana. Kuleana dia soatoavina sy fomba fanao Hawaii tokana izay manondro ny fifandraisana mifamaly eo amin'ny olona tompon'andraikitra sy ny zavatra iandraiketan'izy ireo.
Nanazava i Kuleana
Ohatra, ny Hawaii dia manana ny zon'ny taniny. Tompon'andraikitra amin'ny fikarakarana izany sy ny fanajana azy ireo izy ireo. Ho valiny, ny tany dia manana kuleana hamahana, hialofana ary hampitafy ireo olona mikarakara azy. Io fifandraisana mifamaly io - ity andraikitra feno fanajana ity - no mitazona ny fifandanjana eo amin'ny fiaraha-monina sy eo amin'ny tontolo voajanahary.
Noho izany, rehefa manao veloma ny taona iray izay feno fanamby mihoatra ny eritreritsika fatratra 2019 isika rehetra dia manantena ny 2021 miaraka amin'ny fanantenana vaovao ary miandry ny mpitondra antsika hitarika antsika amin'ny tontolo tsara kokoa. Fa io ve no fomba fanao mety? Tokony hiandry fotsiny fotsiny ve isika mba hisy zavatra hitranga, mba hisy hitarika antsika? Tsy adidintsika rehetra ve izany?
Tsy efa fantatsika ve fa ny maha-zava-dehibe ny “iray” - feo iray, vato iray, hazo iray nambolena, valan-javaboary iray nosokafana, fitsangantsanganana iray natao tamin'ny fiaramanidina iray - dia mety ho ny hery sy ny fiandrasana izay andrasan'ny “izao rehetra izao” manomboka manova ny angovo ratsy ho lasa tsara? Raha marina fa ny zava-drehetra eto amin'izao tontolo izao onenanay dia angovo tsotra amin'ny endriny samy hafa - manomboka amin'ny vatantsika sy ny fanahintsika, mankany amin'ny rivotra iainantsika, mankany amin'ny solosaina finday iasantsika - ary toy ny angovo manintona toy ny angovo, toy ireo manintona tsara tsara, avy eo tsy anjarantsika irery ve ny hanao zavatra, zavatra iray ihany, isan'andro mba hametrahana angovo miabo eo amin'ny tontolo iainantsika mba hanovana ny onjan'ny krizy taloha?
Tsy tokony hiandry ny mpitondra hamoaka ny baolina voalohany amin'ny lalao isika. Tokony efa miasa samirery isika hampahatanjaka an'izao tontolo izao - mitafy ny saron-tava, mitazona ny halaviranao, azo antoka kokoa - ho mason'ny vondrom-piarahamoninao ary fanampiana rehefa ilaina, ary sambatra kokoa - aloavy amin'ny alàlan'ny fividianana sakafo ho an'ny olona ao aorianao amin'ny familiana.
Tsy sarotra ny manao azy, ary tokony ho izay no mitarika antsika isan'andro na misy krizy na loza na tsia. Ny halehiben'ny fandraisana anjara sy ny andraikitra dia tsy voatery hoe manerantany vao misy fiatraikany. Afaka manomboka amin'ny tsirairay amintsika izy io ary ho toy ny riaky ny vatokely nalatsaka tao anaty dobo. Ataovy ilay fanovana tianao ho hitanao. Ataovy zonao izany.
Nanohy i Steinmetz hoe: “Androany, ny Filohan'ny birao fizahantany afrikanina Alain St. Ange, izay mpikambana ao amin'ny birao ao amin'ny WTN ihany koa dia nanoratra tao amin'ny Hafatry ny Taom-baovao fa mila mpitondra fizahan-tany efa za-draharaha ny fizahantany hitarika ity indostria tena ilaina ity mihoatra ny taloha.
Mampalahelo fa na ny mpitondra za-draharaha sasany aza tsy mahalala na inona na inona ary tsy vonona amin'ny zavatra atrehin'ny indostrian'ny fizahan-tany sy fizahan-tany ankehitriny.
Mila fisainana vaovao ny fizahantany, ary io eritreritra vaovao io dia tsy maintsy re sy ampiharina tsy ao anatin'ny sehatra ihany fa amin'ny firafitry ny toekarena ankapobeny.
Tsy manana haitraitra intsony isika handefitra amin'ireo mpitarika izay miahiahy bebe kokoa amin'ny fisehoany manokana amin'ny besinimaro. Tsy mila mpitondra miezaka ny hahazo mari-pankasitrahana izahay, handefa lahateny ary hidera ny fianakavian'ny mpitondra azy manokana fa tsy tena mahalala izay lazain'izy ireo na ahoana no fomba fandraisany anjara amin'ny lahateny novakiany tsotra.
Mila fitarihana tsy misy teritery politika ary vonona hampihatra politika hanoherana izay ezahin'ity virus ity, dia ny fanimbana ny zanak'olombelona. Laharam-pahamehana fotsiny io noho ny fahazoana tombony amin'ny fizahan-tany. Hiteraka vintana tsara kokoa hamela antsika hanangana ity indostria ity amin'ny fomba maharitra.
Izany no antony nanombohanay ny fananganana.travel fifanakalozan-kevitra tamin'ny volana martsa tamin'ity taona ity tao Berlin, Alemana, andro nanesorana ny ITB Berlin ary nirodana ny fizahan-tany.
Izany no antony nankalazantsika ny fandefasana ny Networ momba ny fizahantany manerantanyk amin'ity volana ity. WTN dia miezaka manome feo ho an'ireo izay mila henoina. Toerana iray isaky ny mandeha, orinasa iray isaky ny mandeha, ary ny mpikambana ao amin'ity orinasa ity amin'ny fotoana iray.
WTTC Hoy izy: “Na dia laharam-pahamehana aza ny fiarovana ny fahasalamam-bahoaka, tsy ny fandrarana ny lamba firakotra no vahaolana. Tsy niasa tamin'ny lasa izy ireo ary tsy hiasa intsony ankehitriny. "
Hoy i Steinmetz: “Miombon-kevitra amin'ny WTTC izahay fa tsy ny fandrarana ny lamba firakotra no vahaolana. Na izany aza, tsy mbola tonga ny fotoana hijerena izay fandraràna ny fitsangatsanganana na ovaina. ”
Mitondra mpanararaotra i Kuleana
“Izany no antony nametrahanay ao amin'ny WTN ny Tombo-kase fizahan-tany azo antoka fandaharana mijanona mandra-pahafatin'ny virus.
“Izany no mahatonga ny WTN hanaiky ireo mahery fo fantatra sy tsy fantatra indraindray ao amin'ny indostrianay ao amin'ny WTN mahery fo.travel fandaharana.
“Zava-dehibe ny fiarahan'ny rehetra miasa ao amin'ity sehatry ny fizahan-tany sy fizahan-tany ity. Midika izany fa mila manaiky feo vaovao ho re isika. ”
Maneran-tany, ny fandraisana anjarana mivantana amin'ny fizahan-tany sy ny fizahan-tany ho an'ny harin-karena faobe dia manodidina ny 2.9 trillion dolara amerikana tamin'ny taona 2019. Rehefa nijery ireo firenena izay nandray anjara mivantana indrindra tamin'ny harin-karena faobe (GDP) eran-tany, ny indostrian'ny fizahan-tany sy ny fizahan-tany amerikana dia nanome 580.7 miliara dolara amerikana. Mandritra izany fotoana izany, ao amin'ny laharam-pahamehana amin'ireo firenena manana anjaraben'ny GDP avo indrindra amin'ny fizahan-tany sy fizahan-tany, ny tanàna sy ny faritra fitantanan-draharaha manokana ao Macau dia nahazo ny ampahany betsaka amin'ny harinkarena faobe tamin'ny alàlan'ny fitsangatsanganana mivantana sy fizahan-tany ny toekarena manerantany.
Ankoatr'i Macau, ny firenena sy faritany miankina amin'ny fizahantany dia misy Maldives (32.5%), Aruba (32%), Seychelles (26.4%), Nosy Virgin British (25.8%), US Virgin Islands (23.3%), Antilles Netherlands (23.1%) , Bahamas (19.5%), St. Kitts and Nevis (19.1%), Grenada (19%), Cape Verde (18.6%), Vanuatu (18.3%), Anguilla ary St. Lucia (16%), ary Belize (15.5 %).
Any Etazonia, 21% amin'ny toekarena ao amin'ny State of Hawaii dia miankina amin'ny 10 tapitrisa miampy mpitsidika isan-taona.
Isika rehetra dia te hiala ao aoriantsika ny taona 2020, fa andao hianatra avy amin'ny lesoka vitantsika tamin'ity taona ity tamin'ny valintenintsika tamin'ilay virus.
Ampahafantaro antsika ny antony ahatrehantsika onja faharoa sy fahatelo, ary maninona ny fitsangatsanganana no atahorana tsy ho an'ny mpitsidika ihany. Andao ho fantarintsika ny antony tsy misy ifandraisany amin'ny fiarovan'ny fiaramanidina na hôtely amin'izao fotoana izao. Ny fisafidianana ny fotoana marina hanokafana indray ny fizahantany dia manome antoka ny vokatra maharitra sy tsara amin'ny fanarenana ny toekarentsika. Afaka manao an'izany amin'ny fomba mandaitra ihany isika.
Avelao ny 2021 ho talanjona kokoa noho ny tamin'ny 2020. Andao hijanona ho mamorona, miabo ary manaja ny fianakavianay manam-pahaizana momba ny dia lavitra. Andao hanao ny 2021 ny dia amin'ny taona ary hateraka indray ny fizahan-tany.
Taom-baovao sambatra avy amin'ny World Tour Network!
Ny firarianay ny Taom-baovao dia ny mba hahatongavanao ho anisan'ny hetsika manerantany. Midira WTN ao amin'ny www.tw.travel/register
Virosy COVID mahafaty vaovao manafika ny Southern California sy Colorado